August 22, 2021 - Babal Khabar
Aug222021 by बबाल खबरNo Comments
लामो समयपछि ‘सुपर डांसर 4’ मा देखिइन शिल्पा , चल्यो रुवाबासी!
लामो समयपछि ‘सुपर डांसर 4’ मा फर्किइन शिल्पा शेट्टी, चल्यो रुवाबासी! भिडियो , बलिउड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी लामो समयदेखि चर्चामा आइरहेकी छिन् । पति राज कुन्द्रा पक्राउ परेपछि सोशल मिडियामा उनि र उनको परिवारको निकै ट्रोल भएको थियो। त्यसपछि शिल्पाले सोशल मिडियामार्फत एक पोस्ट गरेर मानिसहरुसंग उनलाई गोपनियता दिन आग्रह गरेकी थिइन्। १९ जुलाईमा मुम्बई पुलिसले पोनोग्राफी मामिलामा राज कुन्द्रालाई पक्राउ गरिएको थियो। जसपछि यस केससंग जोडिएको थुप्रै कुरा बाहिर आयेको थियो। पति राज कुन्द्रा गिरफ्तार भएपछि शिल्पा शेट्टीले आफ्नो कामबाट ब्रेक लिएकी थिइन्। र हाल करिब हप्ता पछि अभिनेत्री शिल्पा फेरी आफ्नो काममा फर्किएकी छिन्। डान्स रियालिटी शो ‘सुपर डांसर 4’ मा शिल्पा फेरी जजको रुपमा देखिने छिन्। खबरअनुसार उनि अब फिनालेसम्म यस शोसंग जोडिनेछिन्। ‘सुपर डांसर 4’ को शुरुवात २०१६ सालमा भएको थि
आईपिओ भर्ने हरुका लागि खुसीको खबर, केही दिनमै ६२ करोडको आईपिओ आउदै ! हेर्नुहोस
पहिले भिडियो हेर्नुस, एकपछि अर्काे गर्दै बिभिन्न आईपीओहरु आईरहेकै छन् । ओखलढुंगा र रामेछापको सीमा नदी लिखुमा निर्माणाधीन ५२.२ मेगावाट क्षमताको लिखु–४ जलविद्युत आयोजनाले ६२ करोड ५० लाखको सेयर निष्काशनको तयारी गरेको छ । यो मध्ये ५० प्रतिशत प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र कर्मचारीका लागि सुरक्षित गरिएको छ भने बाँकी रहने ५० प्रतिशत सर्वसाधारणले पाउने छन् । याे प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र सर्वसाधारका लागि ठूलाे अवसर पनि हाे । ३१ करोड २५ लाख मूल्यको ३१ लाख २५ हजार कित्ता प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र कर्मचारी तथा ३१ लाख २५ हजार कित्ता शेयर सर्वधारणका लागि निस्काशन गर्न लागिएको हो । आयोजना प्रभावित क्षेत्र ओखलढुंगाको लिखु गाउँपालिकास्थित वडा नम्बर ९ पोकली, खिजीदेम्बा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २ र ३ प्रभावित क्षेत्रमा पर्छ । त्यस्तै रामेछापतर्फको गोकुल गंगा गाउँपालिका र लिखु ताम
सुन किन्न चाहनेहरूलार्इ खुशिको खबर ! फेरि घट्यो सुनको मुल्य
थाहा पाउनु अघि जान्नुस यो सुन संग संबन्धित खबर ज्योतिष शास्त्रका अनुसार सपनामा देखिने सबै कुराले हामीलाई केही न केहि संकेत गराइरहेको हुन्छ। सपनाको सम्बन्ध हाम्रो भित्री मन वा आत्मासँग जोडिएको छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। कहिलेकाँही सपनामा एउटा कुरा बारम्बार देखि रहन्छ भने यसको मतलब सपनाले हामीलाई केहि संकेत दिन खोजि रहेको हुन्छ। तर हामी यसलाई बुझ्नभने सक्दैनौ। केही सपनाले भने, जीवनमा राम्रो संकेत पनि दिने गर्दछ। धेरै पटक सपनामा गहना तथा सुन देखा पर्दछ र यसको आफ्नै महत्त्व रहेको हुन्छ। यदि सपनामा सुन देखियो भने जान्नुहोस्, यसले तपाईको जीवनमा के अर्थ राख्दछ र यसले के संकेत दिन खोजेको छ….सपनामा अधिक सुनकागहनाहरु देखेमा, तपाई कुनै विवाह समारोह आदिमा सहभागी हुदै हुनुहुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ, जसमा तपाईको पैसा पनि खर्च हुनेछ। यदि सपनामा आफुसंग भएको सुन अरुलाई दिएको देख्नुहुन्छ भने, कसै
तालिबा’नको क’ब्जा भए सँगै अफगानिस्तानमा फेरी सात जनाको ज्यान गयो ! कारण भने यस्तो
पुरा खबर, काबुल विमानस्थल नजिकै भिड भाड अनि'यन्त्रित हुँदा त्यहाँ उपस्थित सात जना अफगानी नागरिकको ज्या'न गएको छ । आज ता'लिबानका उच्च नेताहरु सरकार गठनको विषयमा छलफल गर्न काबुलमा भेला भएका छन् । यही क्रममा त्यहाँ आवतजावतमा कडाइ गर्दा काबुल विमानस्थल नजिकै भिडभाड बढेर सात जनाको ज्या'न गएको बेलायती र'क्षा मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ । मन्त्रालयले काबुलका विमा'नस्थलको भिडमा ज्या'न गुमाउने सात जनाका परिवा'रप्रति समवे'दना पनि व्यक्त गरेको छ । अफगानिस्तानमा तालि'बानले स'रिया का'नुनलाई लागू गर्ने विषयलाई लिएर त्यहाँका नागरिक ड'राएर देश छोड्न लागिपरेका छन् । अफगानिस्तानमा तालिबा'नको क'ब्जा भएसँगै दैनिक हजारौँको संख्यामा अफगानीहरुले विभिन्न देशमा शर'ण लिइरहेका छन् । यो खबर उज्यालो अनलाइनबाट साभार गरियको हो ।
अाज मात्र १ हजार ९२० को’रोना सं’क्रमित थपिए, मृ’त्यु कति ?
काठमाडौँ उपत्यकामा निषे'धाज्ञा थप गर्नेबारे निर्णय गर्न मंगलबार बिहान तीनवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयुक्त बैठक बस्ने भएको छ। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालिप्रसाद पराजुलीले मंगलबार बिहान बैठक बस्ने बताए। पछिल्लोपटक साउन २८ गते काठमाडौँ उपत्यकामा नि'षेधाज्ञा भदौ ८ गतेसम्मका लागि लम्ब्याइएको थियो। पछिल्लो नि'षेधाज्ञामा राति ८ बजेदेखि बिहानसम्म निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधन चलाउने नपाइने निर्णय गरिएको थियो। सबै प्रकारका सभा , सम्मेलन, पार्टी प्यालेस, सिनेमा हल, डान्स बार, दोहोरी, नाचघर, क्लब, स्विमिङ पुल, मनोरन्जन स्थल संग्रहालय, रंगशालाका गतिविधिमा रोक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक गतिविधिमा रोकलगायत पुराना प्रा'वधान कायमै राखिएको थियो। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकामा सं'क्रमणदर बढ्दै गएको बताए। ‘ देशभरको समग्र हेर्ने हो भ
शा’रि’रिक प्या’स मेटाउन भीआईपी अखडा छिरेका पुरुषले जब आफ्नै श्रीमतीलार्इ भेटै !
भिडियो हेर्नुस, खबर सुन्दापनि धेरैलाई अचम्म लाग्छ । तर यो सत्य हो । भारत यस्तो देश हो जसको कुन भूमिमा के भइरहेको छ थाहाँ पाउँदा अर्को ठाँउकै मानिस चकित पर्छन । विश्वकै धेरै भूगोल भएको यो देशमा जनसंख्यापनि धेरै छ । यसैले अनौठा–अनौठा खबर हुन्छन् । सुपर एक्स्प्रेसले छापेको खबर अनुसार एक स्थानीय बेश्यालयमा श्रीमान आफ्नो यौ'न प्या'स मेटा'उन पुग्छन् । भिडियो हृेर्नुस , रकम तिरेर यौ'न क'र्म गर्ने कोठामा तयारी अवस्थामा बस्छन् । त्यतिकै यौ'न प्या'स मेटाई दिने यु'वती अध्यारो कोठमा प्रवेश गर्छिन । मधुरो उज्यालो, आवाज, चाल र हाउभाउले नै थाहा भईहाल्यो की त्यहाँ आफ्नै श्रीमती आएकी छिन् । भिडियो , युवतीलाईपनि थाहा भयो की ग्राहक श्रीमान् हुन् । एकअर्कालाई हेरेर दुबैको होसहवा'स उड्यो । श्रीमानले जहिले पनि अतिरिक्त खर्चका लागि केही पैसा दिन खोज्दा आफूसँग पर्याप्त पैसा भएको श्रीमतीले बताउ
मालामाल हुदैछन् यी ६ राशिका ब्यक्ती, कतै तपाईको त परेन ?
शनि मकर राशिमा रहेको छ तथा वृहस्पति चैत्र महिनासम्म मकर राशिमा रहने छ । त्यसपछि वृहस्पति कुम्भ राशिमा रहने छ । राहु वृष राशिमा तथा केतु वृश्चिक राशिमा वर्ष भरिनै रहने देखिन्छ । यी नै ग्रहको आधारमा ६ राशि भाग्यशाली बन्दैछन् । तपाइको सम्पूर्ण क्षेत्रमा सफलता हात पार्न सक्नुहुनेछ तपाइको कुण्डलीमा वृहस्पति,शनि,राहु,केतु राम्रो अवस्थामा उच्च,स्वगृही,यूवा अवस्थाको छ भने तपाइले पूर्णफल प्राप्त गर्नु हुनेछ । कुन-कुन राशि भाग्यशाली ? मेष राशि मेष राशिका व्यत्तिलाइ १० स्थानमा शनि,गुरुको अवस्थाको कारणे गर्दा तपाइको बिग्रेका काम बन्नुका साथै नँया कामको थालनी हुनेछ सरकारी जागीर पाउन सक्ने अवस्थाहरु देखिन्छ । वृष राशि वृष राशिका व्यक्त्तिलाई भाग्यस्थानमा शनि,गुरुको कारणले गर्दा भाग्यवृद्धि हुनुका साथै गरेको काममा सफलता तथा नयाँकामको अवसर र सम्पूर्ण क्षेत्रमा सफलता हात पर्दछ । तुला र